काठमाडौं, १३ माघ । नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भोलिबाट लगाउन शुरु हुँदैछ । माघ १४ गते बुधवारबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाट खोप अभियान शुरु गर्न लागिएको हो । बुधवार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप अभियानको उद्घाटन गर्ने अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप पनि अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाउने छन् । यस्तै दोस्रो सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बाँस्तोलाले लगाउने छन् । त्यसपछि टेकु अस्पतालका फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप लगाइनेछ ।
त्यस्तै टेकु अस्पतालमा एक हप्ताको अवधिमा ३ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई खोप लगाइने अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ११ वटा अस्पतालहरुमा खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
जसमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल,भक्तपुर अस्पताल,शहिद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्र,सशस्त्र प्रहरी बलम्बु अस्पताल, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, शहिद गंगालाल अस्पताल लगायत रहेका छन् । बुधबार देशभरका ६२ अस्पताल र १ सय २० वटा खोप केन्द्रबाट खोप अभियान सुरु हुँदै छ ।
एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा नै दुई धारमा
गीतकार टिका खड्काको नयाँ गीत सार्वजनिक
महिला हिं’सा अन्त्य हुनुपर्छः डा. डिला सङ्ग्रौला